Eoropa Afovoany & Atsinanana19 Avrily 2017
Amerika Latina18 Avrily 2017
Miatrika fandrahonana hatrany ao anatin'ny fihetsiketsehana ireo mpanao gazety Venezoeliana, sakanan'i Rosia ny Zello, ary mampiasa fandrahonana ny "vaovao faikany" ireo mpanao lalàna ao Azia Atsimo Atsinanana mba hanamarinana ny sivana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Avrily 2017
Ady & Fifandirana16 Avrily 2017
Amerika Latina13 Avrily 2017
Inona no navelan'ny didy jadona ? Ny zavatra rehetra afa-tsy ny didy jadona.
Niteraka Adihevitra tao Egypta ny Fitsidihan'I Sisi tao amin'ny Trano Fotsy
Raha ny firehana ara-politikan'ny Egyptiana no jerena dia tsy zavatra kely ny fifandraisan'i Sisi amin'ny Etazonia. Kanefa ahoana hoy ireo Egyptiana manoloana izany?
Ampiasaina ny Voambolana “Vaovao Faikany” Handrahonana ny Mpitsikera
Azia Atsinanana11 Avrily 2017
Mikasa hanavao ny Lalànan'ny Fandefasam-baovao i Singapaoro, manolo-kevitra handrindra ny media sosialy kosa ny Filohan'ny Antenimiera ao Filipina, ary maka tahaka an'i Donald Trump ny manampahefana Kambodziana amin'ny fiantsoana ireo vaovao tsy tiany ho "faikany".
Mpaka Sary Amin'ny Tranonkalam-baovao Voasambotra Teo Am-pandefasana Ny Fihetsiketsehana Tao Venezoela
Olona efa ho 30 000 no teo am-pijerena ny fandaharan'ny @VPITV tao amin'ny Youtube raha nalain'ny PNB ny mpaka sary
Amerika Latina10 Avrily 2017